WhatsApp ichakurumidza kukubvumidza iwe kuti uone nyika kubva kune chat tray | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 03/05/2022 10:00 | IPhone maapplication
Muchina weWhatsApp unodarika mafuta. The nhau vanoenderera mberi mwedzi nemwedzi uye ose akakosha zvakaenzana. Pakati pezvinoburitswa tinowana iyo Nharaunda kana mukana wekutumira mafaera anosvika 2GB kana kuita ongororo dzeboka. Ndosaka mabheta eruzhinji aripo pakati pevashandisi vakanyoreswa muchirongwa chebeta vari kugamuchira nhau idzi dzose. Pakati pavo pane zvitsva uye ndizvo mukana wekuona WhatsApp zvimiro zvakananga kubva kune chat tray. Kuchinja kuduku kunogona kuwedzera kushandiswa kwebasa pakati pevashandisi.
Ona mamiriro eWhatsApp kubva pane chat tray, munguva pfupi
Ruzivo rwunobva paruoko rwewebhu inozivikanwa WABetaInfo ivo vane basa rekuongorora nhau dzese dzeWhatsApp beta dzemidziyo yese. Panguva ino hutsva hunobva iyo desktop app beta. Chinhu chitsva chinobvumira vashandisi tarisa mamiriro eWhatsApp zvakananga kubva kune chat tray hapana chikonzero chekudzvanya pane "States" tab.
Idzi nyika dzakauya kumashandisirwo makore mashoma apfuura dzichitevedzera Instagram nyaya, uye yaimbove Snapchat nyaya, dzainge dzakakurumbira pakati pevashandisi. Zvakadaro, havana kubata zvakanyanya sezvaitarisirwa nechikwata cheWhatsApp, asi vachiripo uye kushandiswa kwavo kuri kuramba kuchibuda pachena.
Ichi chitsva ichaita kuti kupinda kumatunhu kugoneke nekudzvanya pamufananidzo wepikicha yemumwe mushandisi. Kana iwe ukadzvanya pamufananidzo wepikicha, isu tinosvika kumatunhu. Kana iwe ukadzvanya pabhokisi patine meseji yako uye zita rako, isu tinowana iyo chat. Pane kusahadzika kuti nei iyi WhatsApp inoda kubvisa iyo States tab mune iOS uye Android shanduro, nekudaro ichisiya nzvimbo yeNharaunda.
Iyi ficha inowanikwa muWhatsApp Desktop beta asi ichauya kune mobile beta munguva pfupi iri kutevera. Kuve basa riri nyore, hatitarisire kuti zvichatora nguva yakareba kushambadza kana kambani ichizviona sekutanga kwakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp ichakurumidza kukubvumidza iwe kuti uone mastatus kubva kune chat tray
Ivo vanobira ingangoita 3GB yedata kubva ku iPhone yeMutungamiriri weSpain